Sidee loo xoojiyaa difaaca ilmo badan oo jiran?
Carruurta Caafimaadka ilmaha
Hooyo kasta waxay ogtahay in ilmuhu caafimaad qabo waa lagama maarmaan in la xoojiyo difaaciisa. Hadda mawduuca sida loo xoojiyo difaacida ilmaha xilliga dayrta waa mid aad u deg deg ah. Si loo xakameeyo difaaca xagaaga ee ilmaha wakhtiga ugu fiican waa dayrta. Sidee loo xoojiyaa difaaca ilmo badan oo jiran?
Nafaqada buuxda ee ilmaha, oo leh ku filan helitaanka fiitamiinada iyo miisaanka iyo habka saxda ah ee maalinta, oo ka kooban safaro iyo wakhti dheer ee hawada cusub. Halkan, laga yaabee, mabaadi'da aasaasiga ah ee xoojinta difaaca.
Khudaarta iyo miraha waxay ka tirsan yihiin cuntada aan loogu talagalin inay ilaaliso difaaca jirka, laakiin sidoo kale si ay u ilaaliso. Taasi waa sababta isticmaalka miraha iyo khudradaha ay aad ugu faa'iideysan karaan difaaca caruurta. Hadda waa mid aad u muhiim ah inaadan seegin miraha iyo khudaarta ugu dambeysa, waxay hadda ku jiraan waxyaabo badan oo faa'iido u leh jidhka carruurta! Diyaari noocyo kala duwan oo suxuun leh oo laga helo miraha iyo khudaarta cunugaaga, laakiin ha ilaawin in jidhku si fiican u nuugo fiitamiin iyo macdano qaab dabiici ah. Xeerarka cuntooyinka caafimaadka leh, waxaa lagu talinayaa in ay cunaan khudradda iyo miraha ugu yaraan 3-4 jeer maalintii, badanaaba foomka cayriinka. Gaar ahaan waxtar u leh difaaca jirka waa fiitamiin iyo macdano ku jira cuntooyin hodan ku ah birta, fitamiin C, zinc, beta-carotene, folic acid, vitamin D, selenium, calcium. Dhamaanba, cunuggu wuxuu cuni doonaa muuska iyo lugaha xilliga jiilaalka.
Haatan waxaynu ku soconnaa hawada furan, sababtoo ah waxay faa'iido u leeyihiin caruurta dhammaan shuruudaha. Oksijiin waa lagama maarmaan u ah hawlaha caadiga ah ee maskaxda, habdhiska jirka, difaaca jirka iyo qalabka wadnaha. Cunto cusub ayaa hagaageysa cunnooyinka, ilmuhu wuxuu bartaa inuu la qabsado qabow, qabow iyo hawo nadiif ah ayaa ka caawisa caruurnimada caruurnimada si ay u yaraato, taas oo ah natiijo ka caawisa caruur ka soo horjeeda cudurrada. Qodob muhim ah ayaa ah sida habboon ee loo gashado ilmaha xilliga dayrta, had iyo jeer waa arrin deg-deg ah, sababtoo ah dhawaanahan ayaa ilmuhu xirnaa T-shirt iyo gaaban. Go'aami waxa aad u xiran tahay cunugga wuxuu noqon karaa mid aad u adag. Waalidiin badan ayaa isku dayaya inay dhar gashadaan carruurtooda jiilaalka xilliga jiilaalka, laakiin tani waa qalad. Ilmo yaryar ma aha mid u qabow sida qof weyn. Taasina waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in jidhka ilmaha yar yahay oo aan la gashanayn, sidaas darteed dhiiggu si fiican ayuu u shaqeeyaa, heerkulbeegga carruurta ayaa ka fiican sidii dadka qaangaarka ah, sidaa darteed haddii ilmuhu aad u kululaado, waxaad heli kartaa jidh dhidid ah oo ka jawaabi doona qoraallo kasta iyo canbaar. Xulashada ugu wanaagsan: marwalba dharka diirran oo dheeraad ah, marka ilmuhu qaboojiyo, kadibna wuxuu ku weydiisan doonaa inuu dhar gashado. Haddii ra'yiga cunugaagu uu shaki ku jiro, ka dibna taabto sankiisa iyo gacmaha, haddii qabow waa lagama maarmaan in la geliyo wax diirran. Habka ugu wanaagsan ee aad ugu habboon tahay dhar ubadkiisa waa inuu dharka lafdhabaxo inta aad ku jirto dharka, iyo ilamaha dhererkoodu ka badan yahay.
Ha ilaawin inaad ku socoto beeraha, gawaarida, meelaha bannaan. Ku raaxee cunuga raajooyinka ugu dambeeya ee qorraxda, maxaa yeelay waxay yihiin fitamiin D ugu wanaagsan, lugaha dheer ee hawada yar ee cunuga yar, koriinka muruqiisa iyo sidaas awgeed jidhka ilmaha diyaar u ah jiilaalka. Kadib safarrada dheer ee caruurtu way waydiisan kartaa in badan oo la cuno. Waana wax aad u fiican, sababtoo ah caruurta xagaaga ayaa yar yara cunaan sababtoo ah kuleylka.
Haddii aad firfircoon tahay xilliga dayrta, waxay si fudud kuu diyaarin doontaa jiilaalka, ka dibna wakhtiga qaboobaha ee ilmaha ayaa sahlanaan doona in la wareejiyo. Iyo xilliga dayrta dambe ha ilaawin inaad la tashatid dhakhtarka carruurta ee ku saabsan baahida loo qabo in la qaato fitamiin diyaargarowga ilmaha.
Dabcan, ha iloobin inaad soo ururiso caleemo kala duwan si ay u qalajiyaan guryahooda oo ay ku qaataan habeenkii jiilaalka dheeraa ee ku shaqeeya waxqabadka hal-abuurka ah ee ilmaha, iyadoo la adeegsanayo waxyaabo la ururiyay dayrta beeraha.
Hadda waxaad taqaanaa sida loo fahmo difaaca jirka ee ilmo badanaa xanuunsanaya. Waxaan rajeyneynaa in tani ay ka caawineyso ilmahaaga inuu ka hortago cudurada oo dhan!
Sidee ula qabsan kartaa muuqaalka kinetosis carruurta?
Dulqaadashada carruurta da'da dugsiga horudhaca ah
Doorashada barkad ilmo ah
Bronchitis: calaamadaha, daaweynta ilmaha
Daaqad furan oo ku taal wadnaha ilmaha cusub
Hurdada jirka iyo caafimaadka hurdada
Horumarinta iyo caafimaadka ilmo dhicis ah
Sida loo sameeyo dhumucda timo dhuuban
Nidaamyada furan oo leh cirbado fiiqan oo leh sharaxyo iyo jaantusyo
Xayeysiinta guga leh kaabajka Pekunta
Xaqiiqooyin aan yareyn oo ku saabsan naqshadda
Lakabka liin leh leh qolada
Xilliga xafiisyada galmada
Farshaxanka Faransiiska Kish ee salmon
Strawberry iyo karootada macaan
Guryaha gudaha: qaabka Japan
Mooska laga soocay
Maraq digaag leh walaaq
Dhammaan jimicsiga haweenka uurka leh
Hooyo da 'yar iyo uurka hore
3 xujo oo ku saabsan feker aan caadi ahayn, kuwaas oo dadka IQ ay xalinayaan koreen 120. Miyaad awoodi kartaa?
Casho qurxin sida hadiyad
Saaxiibo ama dad wanaagsan
Ilmuhu wuxuu leeyahay finan jirka ah